I-STUCCO VS SIDING (UMAHLUKO KUNYE NESIKHOKELO SOKUTHELEKISA) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya I-Stucco vs Siding (Umahluko kunye nesiKhokelo sokuThelekisa)
I-Stucco vs Siding (Umahluko kunye nesiKhokelo sokuThelekisa)
Apha ngezantsi sabelana ngomahluko phakathi kwe-stucco vs siding kunye nesikhokelo sokuthelekisa kunye neenzuzo kunye neendleko zokugubungela iindleko, ukuhlala ixesha elide kunye nokusebenza kwamandla.
I-Stucco kunye ne-Vinyl siding zimbini zeendlela ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ngaphandle kwendlu. Ezi ntlobo zimbini zahluke mpela ekwenzeni, kodwa zombini zilungile ukuzisebenzisa. Ezinye iinkcazo nganye kunye nokuthelekisa iimveliso kudweliswe apha ngezantsi ukukunceda ukhethe ukhetho olulungele ikhaya lakho!
Yintoni iStucco kunye neVinyl Siding
Iindleko zeStucco vs Siding
Yeyiphi i-Stucco eQinisekayo ngakumbi kunye neSiding
Yeyiphi elula yokuGcina iStucco okanye ukuCala?
Yeyiphi eyona ndlela ikhethileyo yokukhetha amandla, iStucco okanye iSiding?
Yeyiphi eyona ROI ibalaseleyo (Buyisela kutyalo mali)
I-Stucco sisixhobo esisetyenziswa ngaphandle kwamakhaya esenziwe ngomxube wesamente yasePortland, isanti, ikalika kunye namanzi. Ngelixa isenokuvakala ngathi sisithako esikhethekileyo, isamente yasePortland yindlela efanelekileyo yokusebenzisa isamente, isandul 'ukufumana igama lesidlaliso lesamente ngokuwisa igama lokuqala ngokuhamba kwexesha.
lide kangakanani ixesha lokutshata
Umxube uphinde usetyenziswe ngaphezulu kwesiseko se-lath ngesiqhelo malunga neebhatyi ezi-3 zokuqina okuzinzileyo. Isiseko se-lath luluhlu nje lolwakhiwo olunokwenziwa ngomthi, ibhodi ye-gypsum, okanye ibhodi efakiweyo.
I-Stucco yinto eyomeleleyo ebonelela ngokuchasene nomlilo, kwaye ihlala ixesha elide kwaye ilungile. I-Stucco sisixhobo esihle sokwenzela ikhaya ngokunjalo, sinceda ukugcina ngaphakathi kwekhaya kubushushu obungaguquguqukiyo kuwo onke amaxesha onyaka.
Kungenxa yoko le nto isitayile sasithandwa kakhulu kwimozulu eshushu kakhulu njengoko sasigcina umoya opholileyo ngaphandle kokufaka i-air conditioning.
Imitshato ye-hawaii kuhlahlo-lwabiwo mali
IVinyl Siding yinto yeplastiki esetyenziswa ngaphandle kwamakhaya amaninzi ukukhusela kwizinto. Le mveliso yenziwe nge-resin ye-polyvinyl chloride (PVC). Oku kunokusetyenziselwa umhombiso. I-vinyl siding inokunika uninzi lwezinto zokuhombisa okanye nokubonakala nje okusisiseko.
Umbala, ubungakanani kunye nokukhethwa kwemilo kuphantse kungabinamda. Unokukhetha kwi-vinyl siding esecaleni, ukuya kwicala elibonakala ngathi yibhodi eqhotyoshwayo, ibhodi kunye ne-batten, okanye ishukuma. I-vinyl siding inokuthi ithathe indawo yesidingo sokusebenzisa i-aluminium okanye i-fiber samente njenge-siding, kuba i-vinyl siding ixhaphake kakhulu. I-vinyl siding inesondlo esilula kwaye ayifuni ukuba ipeyintwe rhoqo. I-Vinyl siding nayo iyimveliso efikelelekayo kakhulu ukuba isetyenziswe njengesixhobo siding.
Indlu esecaleni yeStucco nodongwe amatyathanga ophahla
I-Stucco: Iindleko eziqhelekileyo zokugubungela indlu nge-stucco ziya kuba malunga ne-7 ukuya kwi-9 yeedola ngeenyawo zenyawo. Oku akubandakanyi ukufakwa. Ukufakwa kunokuqhuba naphi na ukusuka kwi- $ 8000 ukuya kwi- $ 12000 kwikhaya eliphakathi.
Ngaphezulu kwelo, ukuba likhaya esele likhona ekufuneka liphinde lenziwe kwakhona kufuneka kubekho uqikelelo olongezelelekileyo lwe- $ 1 ngonyawo wesikwere ukususa i-stucco yoqobo ekhaya. Oku kuyahluka ukusuka kwindawo ukuya kwindawo kunye nekhontraktha nganye, inkampani okanye ivenkile.
Ukuhlala kweVinyl: I-Vinyl siding iyimveliso efikelelekayo kakhulu eqhuba kuphela malunga ne-1 ukuya kwi-8 yeedola ngeenyawo zenyawo, kuxhomekeke kwindlela othanda ngayo izinto ogqiba ukuzithenga.
Ukongeza, ixabiso lokufaka i-vinyl siding limalunga ne- $ 2500 ukuya kwi- $ 10000 kwikhaya eliqhelekileyo, kwakhona kuxhomekeke kubuqhetseba bokuyila kunye nobukhulu bekhaya. Indawo kunye neemeko zinokwahluka ngokwendawo ukuya kwindawo leyo ke qiniseka ukujonga ekuhlaleni.
I-Stucco: Icala elinye ukuya kwi Indlu yes stucco ayomelele kwaphela kwiimeko ezithile zemozulu, njengesichotho okanye umoya. Ngaphandle kwemvula eninzi i-stucco inengxaki yokugcina amanye amanzi ngaphandle kwekhaya. Olu hlobo lokwakha lungcono kwaye luqhele ukusetyenziswa kwimozulu eshushu ngesi sizathu.
enxibe ezimhlophe emtshatweni
Ukuhlala kweVinyl: I-Vinyl siding inombala ngokupheleleyo ngemveliso, ke akukho nto ipeyintwayo kwaye akukho monakalo ubonakalayo xa kukho into ephikisana nayo. Oko kuthethwayo ukuba ukuhlala ixesha elide kunento yokwenza nomgangatho wofakelo.
Le mveliso iyanda ngamaqondo obushushu ukuze ingatywinwanga ngokupheleleyo ukuze iphendule kuloo nto. Ukuba imveliso ixhonywe kakhulu kunokuba iiphaneli zinokuhlanjwa. Imveliso inokuqhekeka okanye yaphule ukuba kukho into enzima kakhulu ebabethayo. Ngaphandle koko, i-vinyl siding inokumelana neemeko ezininzi zemozulu.
Ophumeleleyo: IVinyl Siding
Kwizinto ezomelele ngakumbi umntu unokujonga indlu ene izitena zangaphandle .
I-Stucco: Umbala weStuccos uya kuphelelwa lixesha, ngenxa yoko kuya kufuneka upeyintwe ngamaxesha athile. Kodwa loo nto inika ithuba lokutshintsha umbala xa uziva isidingo sokunonga izinto phezulu!
Ukujikeleza kweVinyl Ngombulelo ngombala we-vinyl siding yiyo yonke loo nto kungafuneki ukuba uphinde upeyintwe! Zonke iimfuno ze-vinyl siding kukususa mhlawumbi kube kanye ngonyaka kwaye ziya kujongeka zintsha. Ngelishwa amanzi anokungena phakathi kweepaneli kwaye angenza ukungunda okanye ukungunda.
Ophumeleleyo - IVinyl Siding!
I-Stucco: I-Stucco lolunye lwezona zikhetho zibalaseleyo zokusebenzisa amandla. I-Stucco igcina imo yezulu ngaphakathi ingaguquguquki kwaye isetyenziswa kwimimandla eshushu ngenxa yolu mgangatho. Akukho mingxunya okanye mingxunya kwaye imveliso ityebile ethintela nantoni na ukuba ingene okanye ishiye ikhaya.
Ukuhlala kweVinyl: I-Vinyl siding ayiboneleli ngokhuseleko kwindlela yokugquma ikhaya. Kufuneka kongezwe ukongezwa ekhayeni ukubonelela ngokusebenza kwamandla kwizithuba. Xa kufikwa ekusebenzeni kwamandla kwe-stucco vs siding, impumelelo ye-stucco.
yintoni umbala ongazinxibi emtshatweni
Ophumeleleyo - Stucco
I-Stucco: Imbuyekezo kutyalo-mali lwe-stucco iya kwahluka kakhulu kwindawo efakwe kuyo. Gcina ukhumbula ukuba i-stucco luhlobo olubiza kakhulu lokugqitywa kwangaphandle, ke ukufumana ukubuya okupheleleyo kuya kuba nzima ngakumbi kunezinye iindlela ezingabizi kakhulu ukuqala ngazo. Ngokwesiqhelo imbuyekezo yotyalo-mali imalunga nama-70%.
Ukuhlala kweVinyl: I-vinyl siding iba yinto eyamkelweyo ukuba isetyenziswe emakhayeni ngenxa yoko ayisosithintelo kutyalo mali lokubuyela ekhaya. I-Vinyl siding inokusetyenziswa ngokuyilayo ukwenza ikhaya elingaphantsi kunqweneleka likhangeleke lihle ngexabiso eliphantsi. Oku kunokunceda kwaye kukwenzakalise. Ingakhangeleka intle, kodwa ngaba abantu baya kucinga ukuba ugubungela into?
Kumakhaya abalulekileyo ngokwembali, ukufaka endaweni ye-vinyl siding kuyonyusa kakhulu imali oyibuyisileyo kuba ayizukucaphuka ngexabiso kwaye umthengi onomdla uya kuyibona ukuba intsha kodwa usaqhubeka nokudlala iinjongo zokuqala. Ngokwesiqhelo imbuyekezo yotyalo-mali imalunga nama-80%.
Ukufumana ezinye izimvo ezinxulumene noko ndwendwela isikhokelo sethu imibala yendlu yangaphandle .
ipiyano ingoma yomtshato ingoma
Urenta umolokazana unxiba umtshakazi kaDavid